Is Debian haina basa nhasi? | Kubva kuLinux
Is Debian haina basa nhasi?
About yedu yazvino kuongorora kwemwedzi pane iri rakanakisa Linux distro, mablog-anotaura chiChirungu akaunza kwakanyanya mhirizhonga kunoenderana ne chinyorwa Yakatumirwa naSteven J. Vaughan-Nichols maanopikisa kuti Debian haasisiri iro rairehwa pakutanga muLinux world..
Mune ino posvo ini ndakaedza kupfupisa nhaurirano, ndichiratidza dzakasiyana nzvimbo nenzvimbo, vese vakapokana kwazvo uye vakakomba. (Pasina kutukwa uye kushoropodzwa kusingabvumirwe uko kunowanzo kuwanda mumhando dzehurukuro idzi).
Icho chinyorwa chakareba asi chakakosha kuverenga icho chose. Paunopedza, usakanganwa kugovana zvaunofunga nesu tese!
1 Sei Debian anga asisina kukosha sezvakamboita?
2 Rimwe divi remari
3 Pasina Debian hapana Ubuntu
4 Nharaunda, kwete makambani makuru
5 Debian haisi Linux chete
6 Debian yakasununguka
Sei Debian anga asisina kukosha sezvakamboita?
Steven J. Vaughan-Nichols inopokana kuti:
"... Zvinoita sekunge kwandiri Ubuntu, nekushandukira kwayo kuenda Wayland, ichitsiva yekare graphical X server, uye kuyedza kwayo kukambani nyowani, Kubatana, iri kushandura zvishoma nezvishoma desktop yeLinux uye ichifungidzira hutungamiriri hwaimbove naDebian. Panguva imwecheteyo, Ubuntu iri kuramba ichiwedzera mushandisi weLinux, nepo Debian ichiri sisitimu inoshandiswa chete nevateveri veDebian vakaoma. "
Vaughan-Nichols anobvuma kuti "Debian ichiri kukosha", asi panguva imwechete inosimbisa kuti "Debian iri kuramba isingakoshese (kana yekufarira zvishoma) kune ruzhinji rwevashandisi veLinux, kunyanya zvine chekuita neUbuntu uye nezvimwe zvinobva distros Debian».
Rimwe divi remari
Ngatitaurei kuva vakatendeseka: Debian haazivikanwe nekuve ari "akajairika" mushandisi anoshamwaridzika distro. Debian agara achikoshesa zvimwe zvinangwa pamusoro pekuvandudza distro, ngatizvidaidzei kuti "mukurumbira." Pane kudaro, ivo vaigara vachisimbisa kugadzira yakatsiga, yakavimbika distro isina mapurogiramu echinyakare kana ekugadzirisa asi anoshanda zvakakwana. Kunyangwe pabepa kugadzikana kwayo kunoonekwa kunogona kutaridzwa sechikonzero chekukwezva vashandisi vazhinji, chokwadi ndechekuti vazhinji vedu, nefashoni kana nekutadza, tinosarudza kuve nezvazvino kunyorera uye nekuvandudza.
Nekudaro, kunyange chiri chokwadi kuti zvimwe zvekucherechedzwa kwaSteven ndezvechokwadi, ndezvechokwadi, kubva pakatarisana neyakajairika uye yemusango desktop mushandisi uye kwete zvakanyanya kubva pakuona kwevagadziri kana maneja maneja, nezvimwe. Mune mamwe mazwi, kugadzikana kwaDebian, uko kunogona kusakwezva kune vazhinji vashandisi vepa desktop, sezvo zvichiuya pamutengo wekusave newazvino kuvandudzwa kana "zvinopisa" kunyorera, inogona kuve chikonzero chakanakisa chekukurudzira vanogadzira kana manejimendi. Kusarudza solid, yakasimba uye yakavimbika distro saDebian.
Tichifunga izvi, tinogona kuona mukana mukuru weLinux pamusoro pemamwe masisitimu anoshanda: rusununguko rwunotipa. Mune mamwe mazwi, kukosha kweDebian, nezvakanaka nezvayakaipira, zvinoenderana nezvinodiwa nezvinodiwa zveumwe neumwe. Zviri kune mumwe nemumwe, saka, kugara naDebian kana kushandisa imwe distro. Kungori mukana wekuita iyi sarudzo yatove mukana pamusoro peWindows, semuenzaniso.
Mune inotevera, tichatarisa mamwe emifungo mikuru mukukurukurirana pakati pevaya vari "ve" uye "vanopokana" nekutaura kwaSteven nezve "kusakosha" kwaDebian.
Pasina Debian hapana Ubuntu
Hazvina maturo kutaura kusakosha kweDebian uchishandisa Ubuntu semuenzaniso. Kana iwe uri kushandisa Ubuntu (kana Linux Mint, Mepis, nezvimwewo), uri kunyatso kushandisa Debian nekumwe kugadzirisa. Zvinoenderana nehurukuro yakapihwa neimwe yeDebian Project Vatungamiriri (DPL), Stefano Zacchiroli, chete 7% yeUbuntu inobva kumapurojekiti eCanonical epakutanga kana mamwe mapurojekiti asiri eDebian. Kune mamwe ese, 74% yeUbuntu anovakwazve maDebian mapakeji, uye akasara 18% akakwenenzverwa, akagadziridzwa, kana etsika Debian mapakeji.
Debian ndiyo yakasvibirira inoshandiswa kuvaka Ubuntu, Linux Mint, uye gumi nemaviri Linux distros ayo ari kutaridzika kwemazuva ano uye ari nyore kushandisa. Nekudaro, iyo chikonzero Ubuntu nevamwe vese vanokwanisa kuburitsa "make-up" Linux distros imhaka yekuti vanogona kudzivirira kuita "rakasviba basa" rinoitwa neDebian vagadziri. Dai iyo chirongwa cheDebian chaizonyangarika mangwana, chingave chinhu chinouraya kune ayo akatorwa marisros. Ingotarisa iyo Linux distros muti kuziva.
Debian haana kumbowana chikwereti chake chakakodzera. Ehe, Ubuntu inogona kunge yakakunda pamusoro pevateereri vakawandisa, inogona kunge yakatokwezva vashandisi vatsva kuLinux nyika, asi yaive Debian yakafemera Mark Shuttleworth kugadzira Ubuntu.
Zvakare, hausi zero-sum mutambo. Ubuntu inogona kuve inozivikanwa mazuva ese uye izvi hazvireve kuti Debian ishoma kudaro. Pane zvinopesana, zvinoreva kuti Ubuntu iri kunyatsoita basa mukukwezva vashandisi vatsva. Chokwadi, kunze kwevashandisi veUbuntu zana, vashoma kwazvo vasiya Debian kuti vachinjire kuUbuntu. Ruzhinji, nerombo rakanaka, rinobva pakushandisa Windows.
Chekupedzisira, haisi chete Debian-yakatorwa distros iyo inobatsirwa nazvo. Nharaunda yeDebian ndeimwe yeanoshanda zvakanyanya kana zvasvika pakutsvaga nekugadzirisa zviputi mumapakeji anowanikwa mune angangoita ese ma distros, kunyangwe iyo Linux kernel pachayo.
Nharaunda, kwete makambani makuru
Debian haina kumbobvira yavimba zvakanyanya kusvika pamashini esisitimu anoshanda. Chero bedzi nharaunda yaDebian ichiramba iripo, Debian ichave iriko kwenguva yakareba.
Zvichida mupiro wakakosha waDebian kunharaunda yeLinux ndeyekuti hautsamirike nekambani yemari. Kana 2010 ikatidzidzisa chero chinhu, ndechekuti kuve ne mega-mubatanidzwa semubatsiri kunogona kukonzera kusagadzikana kwakanyanya zvakanyanya uye kufa kweprojekiti zvakanyanya. Nharaunda yeOpenSolaris yaifanira kutambura kubva mumumvuri weOracle kusvika padanho rekuti chirongwa ichi chakaguma pasina.
Vanhu veMandriva vakanga vasina zvirinani zvakanyanya. Iyo kambani ine zvakakomba matambudziko emari ayo muna 2010 aifanira kubvisa chikamu chakakura chevagadziri vayo. Iyo forogo ingango famba zvirinani, asi vanogadzira vayo vanofanirwa kuomesa kukosha kwerusununguko.
Kutenga kwaAttmate kweNovell hakuna kuunza mhedzisiro. Attachmate yaishandiswa seTrojan bhiza nemamwe makambani (Microsoft, Apple, EMC, uye Oracle) kutora yakawanda yemapatendi eNovell. Izvi, hongu, zvakamutsa mibvunzo mikuru nezve ramangwana reSUSE uye kuvhuraSUSE.
Debian, pachikamu chayo, inogara ichienderera kumberi ... kunyangwe vamwe vanganetseke kuti haifambe pane yaunoda kumhanya. Iyo ramangwana reiyo purojekiti iri zvachose mumaoko enharaunda yayo yevagadziri vanoshanda pasi pechibvumirano chemagariro icho chinoona kuti chirongwa ichi chinokoshesa vashandisi uye software yemahara. Sarudzo hadziitwe zvichibva pakudiwa kwekutengesa chigadzirwa mumusika kana pakuda kwe "mudzvanyiriri ane mutsa." Iko kupa uye kutora. Distros inotsigirwa nemabhizimusi makuru emakambani anowanzo famba nekukurumidza, ari nyore kubatwa nezvinodiwa mumusika, uye ane mamepu emigwagwa anofungidzirwa uye mazuva ekuburitsa. Zvese izvi zvinowanikwa nekubhadharisa kupihwa hwakawanda hutongi hwechirongwa kumakambani aya.
Debian haisi Linux chete
KurwisaAvo vanofarira kucheka nekuisa masisitimu anoshanda uye kuyedza zvinhu zvitsva vanofanirwa kufara kuti Debian inogona kuiswa uchishandisa FreeBSD. Chokwadi, budiriro, asi iyo inongokwezva kune mashoma mageek.
Mukuda: Ichokwadi chekuti Debian inotsigira FreeBSD ingangove yakanyanya kukosheswa kana iyo yekupedzisira ichinyanya kufarirwa, asi kunyangwe izvozvi ine zvayakanakira pamusoro peiyo Linux vhezheni, senge rutsigiro rweZFS faira system.
Debian inogona kunge isiri iyo inoonekwa kwazvo yeLinux distro, uye mapakeji ayo anogona kunge asiri iwo ekumusoro-kumusoro, asi inopa mamwe maficha ayo mamwe ma distros asinga sanganise. Semuenzaniso, rutsigiro rwevakawanda mapurani: PowerPC, PA-RISC, uye MIPS-based michina.
Kurwisa: Kutanga neKusvina, Debian haizosanganisi mafemu eimba anouya neLinux kernel. Iwo achiri kuwanikwa ekumisikidza nekubatanidzwa kana zvichidikanwa, asi ivo vakabviswa nekukasira uye vakasarudzika mune "isina-yemahara" dura kuitira kuti vakwanise kuzivikanwa uye kusiyaniswa kubva kune mamwe matura zviri nyore.
Izvi zvinogona kuve zvinokwezva kana kukosha kune vateveri vanonyanyisa vaRichard Stallman, asi kune vazhinji vashandisi vepa desktop zvichangova netsa nekuti havazokwanise kushandisa yavo Wi-Fi kadhi nemazvo uye havagone kuwana zvakawanda kubva muvhidhiyo yavo Kadhi., nezvimwe.
Nekuita izvi, Debian ari kugutsa vateveri vayo "vanonyanyisa" uye haasi kufunga nezvekugadzira zvinhu nyore kuwedzera vashandisi vatsva.
Mukuda: Nekubviswa kwezvinhu zvese zvine chekuita nekambani, Debian angave akatendeka kuchisungo chake chehukama uye kuzvipira kwayo kune yemahara software, ichipa vashandisi mabhenefiti ese ayo akasununguka sisitimu inopa.
Source: Network Nyika & Server Kutarisa & ZDNet: Linux & Vhura Source
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Is Debian haina basa nhasi?
Pakutanga ndaishandisa Ubuntu 10.10 nekuti zvese zvaive otomatiki. Nekudaro, kubva pakutanga ini ndaida kuve mushandisi weDebian, uye ini ndaiziva chaizvo kuti ndaingoshandisa Ubuntu kwechinguva, uye kuti pandakangoziva kuti yaive repository uye zvimwe zvinhu ndaizoenda kuDebian.
Ini ndakangoshandisa Ubuntu kwemwedzi mitatu uye nekuburitswa kwaDebian Squeeze ndakafamba zvachose uye handina kuzombodzokera kuUbuntu. Pakutanga ini ndanga ndisingazive maitiro ekushandura marekodhi, maitiro ekuisa iyo flash plugin nezvimwe zvinhu. Ini ndakadzidza uye mune isingasviki mwedzi miviri ndakanga ndatova nedzidziso yandaitira vamwe vashandisi.
Ndizvo here zvese zvandanga ndichiita muDebian kuti ndigadzirise ndanga ndichizvinyora pasi, uye rimwe zuva ndakangozvitsikisa paTaringa neblog rangu.
Kunyangwe ndichiri mucheche, ini ndinotonzwa senge nyanzvi nekuti pakutanga hapana chandaiziva. Muchokwadi ini ndatoisa Arch (zviri nyore), asi Debian ndiyo yakanakisa uzivi hwayo, uye zvakare nemhando yayo.
Dai Linux yaive mutambo wechess Debian inogona kunge isingakoshese pawns, iwo anongotarisa, anotamba mp3s nemavhidhiyo, asi kune epamusoro-soro chess zvidimbu zvakanyanyisa, ivo vashandisi vanoita zvavanoda neOS yavo, zvese uku kutaura zvekushandisa mudzimba nekuti mumaseva hapana chikonzero chekutaura. Ikozvino zvinonzi Debian haina ichangoburwa musoftware asi chete iro rakagadzikana-rakagwamba nechando bazi, butTesting (iro rakadzikama kwazvo, pamwe neshanduro yekupedzisira yechero kugovera) uye Isina kugadzikana, kana iine mapakeji nyowani.
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve Linux Kuisa Debian.
Kana iwe uchida kuramba uri Wekupedzisira Mushandisi Anogarira Ubuntu, iyo sisitimu inoita zvese kuitira kuti iwe urege kudzidza chero chinhu, iyi nyaya inondiyeuchidza nezve OS yakauya nekumira paLaptop yangu pandakatenga iyo.
Pindura kuna mysta
Debian ndeyekugara kwenguva yakareba tsika dzekudyara. Iyo uye ichave yepasirese yekutenda kune vanhu vanougadzira nekuishandisa.
Mukuda: iguru pane distro, kana kwete?
Semushandisi weDebian ini ndinoona zvakakodzera kutaura kuti ini ndakatanga neUbuntu, ipapo ini ndakaedza akati wandei ma distros, uye ndinonamatira naDebian, zvisinei izvi zvinowira zvakanyanya mukati mega kuravira uye zvido zvemunhu wega wega. Ini ndiri wekupedzisira mushandisi uye ini handina ruzivo rwekutaura mukati meiyo parameter Debian iri nani kupfuura Red Hat, kana yayo yemahara vhezheni, Fedora ... Kana ini ndichifunga kuti isu vedu varipano pasi pano tiri kusangana zvakadzama shanduko, hupenyu huri kuchinja uye ari kushandura hunhu hwake mukutsvaga iri nani yemhando yehupenyu. Kana isu tichitaura nezveazvino mamiriro eDebian, ini handifunge kuti tiri kutaura nezve chimwe chinhu chiri nyore, asi ini ndinofunga kuti Debian ari kutamba kiyi mune chimwe chinhu chakadzika kwazvo, nzira yatinoda kurarama, zvingave zvakasiyana sei hurongwa hwehupfumi, uye anogona Iyo Debian ndeimwe yeanotungamira kune ramangwana rezvehupfumi hwepuraneti, izvo zvatisingakwanise kana kunyora zvakadaro, asi kana ndichinyatsotenda kuti iri kuvandudzwa, marezinesi akadai seCreative Commons semuenzaniso, pakati pevamwe, anoratidza kuti chimwe chinhu chiri kufamba uye kuti avo vavanotya kudonha vari kuzvichengetedza. Wadii kurwisa Red Hat, kana Slackware inova iyo yekare inoshanda Linux distro? Zvakanaka kuti isu tinoziviswa zvakanyanya sezvinobvira uye ndinofunga inguva yakanaka yekufungisisa nezvebvumirano yemagariro eDebian http://www.debian.org/social_contract uye tarisa kune vamwe vari mukutsvaka kumwe chete kuita imwe sisitimu http://creativecommons.org/tag/america-latina Kana ini ndichifunga kuti nyaya uye hwaro hwayo hwairi kuburitswa hwakaoma, iyo Internet iri kutyisidzirwa (SOPA Mutemo) uye haisi nyaya yakapusa yezvakanaka nezvakaipa, iri kure nazvo, zviri mumaonero angu, nyaya yekugadzira iyo nyowani system inobvumidza yakakura kutora chikamu uye mikana mikuru yezvose kune vese, asi izvo zvinoreva shanduko dzakadzama munzira yazvino yekurarama nekufungisisa zvinhu. Vanhu vanorarama kubva paDebian, sekutaura, vanhu, vane zvido zvehupfumi senge munhu wese, asi ivo vari kutsvaga kuzvigadzirisa neimwe nzira. Izvo zviri kubva kunze uye semushandisi wekupedzisira ndinotenda zvakasimba kuti zviri kuitika.
Pindura kuna palmi
Murume, kutaura kuti Debian haina basa, kunyangwe Steven J. Vaughan achiti zvinoita kwandiri sekunge hazvina basa, zvakakodzera kubviswa basa. Maonero ake, zvisinei, anoita kwandiri seanotarisirwa. Ubuntu hwakakosha kwazvo, asi ndehweCanonical uye zvave kutozivikanwa kuti Canonical iri kubva kune bhizinesi renyika, iro rinoda purofiti. Kana mabhenefiti akagadzirwa, zvinoreva kuti pane zviripo uye izvo zvinodhura zvinofanirwa kutakurwa nemushandisi wekupedzisira, kana handiti? Debian yakasununguka uye inochengetwa nharaunda yepasi rose. Ndatenda Debian. Chero bedzi Debian iripo pachave neemahara software. Debian acharamba akangwarira kuti izvi zvive zvakadaro. Nezve izvo zvehunyanzvi zvinhu, ndinofanira kutaura kuti ndakaedza zvese kugoverwa uye izvo zvese zvinoita senge kwandiri. Hapana chiri nani kana chakaipa kupfuura chimwe. Ramba uchifunga, Sras / Srs, kuti tiri kutaura nezvemahara software uye kuti izvi zvinogona kureva kuti mushandisi anofarira kana kufarira kugovera kumwe kupfuura imwe, iyo yandinofunga inobatsira zvakanyanya uye zviri pamutemo uye inowira mukati merusununguko rwemumwe nemumwe imwe yekugona kusarudza chaunofunga kuti chinonyanya kubatsira pazvido zvako.Izvi ndizvo zvinotisiyanisa isu vashandisi veGNU / Linux kubva panowanikwa windows. Rarama kwenguva refu GNU / Linux!
Kutenda neComfusion yako ndingafarire kuti pamusoro peiyo DVD yako yakanakisa, iwe waizotora script uko mapakeji eako akanakisa distro akasarudzwa.
Dambudziko rinogara richitanga kubva panzvimbo imwechete: kuremedza zvinopesana.
Ini ndanga ndiri muevhangeri mukuru wepachena software mukutanga kwangu, ikozvino ndashandurwa kuva mushandisi-akavhurika sosi, nei? Nekuti kunyangwe hazvo Debian iri chirongwa chikuru chakakodzera kurumbidzwa, vanhu havagari chete kubva mumafungiro, uye havangorarame chete kubva technology. Ndiri kurwara neruvengo rwevamwe, uye izvi zvinosanganisira software yevanobata. Iwe unofanirwa kutsvaga yepakati nzvimbo, isa zvematongerwo enyika padivi uye pamusoro pese kutsiga uchifunga kuti Debian chivimbiso chekuenderera kweFree Software. Kwete, haina kunyanya kupfuura kumwe kugovera kana mapurojekiti. Mukufunga kwangu -kuda kwekuti zviri izvo chete, maonero: hazvisi nani kana zvakanyanya-, kana Debian ndiye mutakuri akajairwa weFree Software uye haifanire kunge iri iro rakanyanya kugoverwa.
Zvichida, VaVaughan vakatsanangura mamiriro ezvinhu nenzira isiriyo, kubva mumaonero angu, kunyangwe ini ndisingafunge kuti Debian haina basa, ndinofunga kuti inotevera muenzaniso wekuvandudza uyo ungangove wechinyakare. Kune rimwe divi, inoedza kutsigira zvakavakwa zvakawandisa uye huwandu hwemapakeji izvo zvinoshandura mukuita kunonoka uye kudhura, kune rimwe divi, iyo yekuyedza nzira inogona kubatsira zvakanyanya pakutanga kwemapurojekiti asi nhasi, vakura zvakakwana kutevera imwe mhando yekuwedzera kusimudzira kukura. Chero nzira, Debian ndiDebian uye vanhu vanozvida nezvazviri.
Pamashoko akaita seako, vese avo vanokanganisa mafungiro eiyo FSF uye neavo vanoichengetedza zino nembambo, vanhu vazhinji vanosiya Debian kana chero kugoverwa kune hukama naDebian, nekuda kweiri nyore kuti kunyangwe chikamu chehunyanzvi chingauya Kuti uve unoyemurika, chikamu chemafungiro hachina kunyanya-kwete kana kure-.
Kuti ndiwedzere pamusoro pazvo, kungotaura chete kwakakomborerwa se "Debian mitemo !!!" hakuna, izvo zvinotungamira pasina uye zvinoratidza kushomeka kweruzivo kana zvasvika pakubata nenyaya idzi dzakasarudzika uye dzinofinha, idzo nhasi ndazvibvumira ini umbozha hwekutambisa nguva uchivaita kuti vaone kuti vese vari vaviri vachiri vananyanyisa vanoita komputa hupenyu hwavo, nekuti hapana chimwe chinhu.
Hongu ... Ndine hukama hwepakati neFSF. Ndinomuremekedza, ndinofunga ndiye
zvakafanira kuvapo. Asi, kune rimwe divi, dzimwe nguva mabhatani anotumirwa
zvakakosha. Chero hazvo ... yega yega institution inogadzirwa nevanhu ... haha. Chii
Pfungwa huru yekupedzisira.
Musi waChikunguru 7, 2011 16:43 PM, Disqus
Ha ha ha chaizvo !!!
Debian inotonga !!!
Pindura kuna Betobetoman
Ini ndinongogona kutaura kuti mukomana uyu ndiye moron, kuti Debian haina basa? Ini ndiri mushandisi weUbuntu kubvira vhezheni 8.04 ini parizvino ndinoshandisa 10.10 uye yakagadzikana uye inotaridzika zvakanaka ASI, nguva pfupi yadarika ndakave nechido chakakura chekuyedza Debian, (pamwe nekutenda kune anokurumidza zvirevo zvemachechi pamwe nekubatana uye chimwe chi ** * deras) uye kana ndisati ndazviita zvakadaro zviri nekuda kwekushaya nguva, asi usakahadzika kuti ndichazviita nekukurumidza kana ndawana nguva, zvakadaro, ndinofunga kuti kubva kuUbuntu ini ndakatodzidza izvo zvandaifanira kudzidza uye inguva yekuwedzera mahoroni angu uye kubhururuka kuenda kunzvimbo nyowani distros, uye ini ndinofunga Debian kutanga kwakanaka uye KUNYANYA KUNYANYA.
Zvisinei, ini ndichiri kupa Ubuntu mukana nekubatana kwayo, uye ndinovimba kuti zvakare ine mukana wekuisa gnome 3, asi kana isina yekupedzisira, uye kubatana kwakabatana hakukodzeri ini, ini ' ini ndichangoti: «Mhoro kukwazisa wangu mudiki Debian» xD
Marcelo Nóbrega akadaro
Iyo "inofanirwa kuve yakasununguka chose" huzivi kupenga chaiko. Zvakafanana nekunyepedzera kurarama nhasi takaparadzaniswa ne "vakaipa vakomana vehurongwa
Pindura Marcelo Nóbrega
Ivan Barrera akadaro
Mune maonero angu ekuzvininipisa, ini ndaive mushandisi weLinuxMint, uye ini ndakasarudza kuyedza debian, ini ndiri mushandisi wepakati maererano neLinux, vanhu vazhinji vanosarudza kushandisa ubuntu kuitira nyore kana kureruka, chokwadi ndechekuti ini ndakaisa Debian Squeeze uye pasina dambudziko kushanda. 100% zviripachena semushandisi wecas nekuti ini ndinoshandisa proprietary software asi isarudzo yemunhu wese.
Iko shanduko kubva kuMint kuenda kuDebian yaive nekuti Mint haina kunyatsogadzikana debian uye pakuisa zvinyowani mafomu yakadonhedza komputa, kana ichiedza kuve neanopfuura ma2 Desktops kusarudza kubva, zvakare yakadonha, iine debian inovaunzira nekutadza uye iwe unogona mumhanye pamufaro.
Debian, ikholamu yeLinux, asi nei iri imwe yeakarebesa? Pamusoro pekuramba wakasimba mukuzvipira kwayo munharaunda uye Idea, kugadzikana pamberi pazvino. Naizvozvo ivo vanogona kutaura zvavanoda nezve iyi distro asi ivo vanoda chimwe chinhuzve kutofunga kuti hazvichazovapo.
Pindura kuna Ivan Barrera
Ini ndinobvumirana nevamwe vanoti kuramba kwaDebian pachikamu chemushandisi zvakajairika kushayikwa kweruzivo, ndanga ndiri mushandisi weDebian kwerinenge gore. Dambudziko rave rekuti kana zvasvika pakukurudzira vashandisi vatsva (windoseros xD) yagara iri neubuntu, muenzaniso ndewekuti mumahara software misangano chero kuratidzwa kana kusimudzira kwakaitwa kuburikidza nehunhu uye kana vakauya kuzopa ma cd, ps fungidzira chii distro ... zvakanaka ubuntu !!!, ipapo kuve uyu wekutanga kusangana kunoita kuti mushandisi arambe shanduko (sekubva kubva kumawindo kuenda kugnu / linux).
Chero zvazvingaitika, chokwadi chekusarudza Debian kana Ubuntu kana chero imwe distro, sezvavanotaura yakawanda inyaya yekuravira, ini ndaishandisa Ubuntu mukutanga kwangu asi mumishini chaiyo, pandakasarudza kunyatsoisa mahara software pakombuta yangu. , Debian akasarudzwa Kunyangwe izvo zvishoma zvandaiziva nezvazvo ndezvekuti yaive yakagadzikana, uye matambudziko mazhinji aakandipa, asi izvo zvese zvinoenderana nezvinodiwa neumwe neumwe uye kuda kwavo kutsvaga nekuedza zvinhu zvitsva.
Semufananidzo wandakawana unoti:
«Zvinhu zvakanaka zvinouya kune avo… mira !!!
salu2 uye hupenyu hwakareba Debian !!!!
Ini ndiri mushandisi wazvino wedhiri, uye parizvino zvakanyatsonaka. Usati washandisa ubuntu kwemakore akati wandei.
Ini ndinofunga ubuntu inopa zvimwe zvivakwa, senge kuiswa kuri nyore, bata zvishoma zvishoma, usingazive zvimwe zvinhu (zvinoita senge mumawindows)
asi ini ndinofunga debian yakanyatsogadzikana, uye kwete chete mubazi rakatsiga, ndiri kushandisa kuyedza uye inoshanda chaizvo. Naine kugadzikana, ndinoreva kuti izvo zvinhu zvisinganzwisisike zvinowanzoitika mu ubuntu hazviitike, sekurembera kuti mapaneru anonyangarika nekuti hongu, mushure mechinguva unokwanisa iwe fomati (zviri nyore kwazvo kuomesa, kwete senge mumahwindo, asi chaizvo zvinogumbura, zvinondiyeuchidza nguva dzakaipa: P) uye zvinhu zvakadaro.
sezvo mapakeji asiri echinyowani ... zvinogona kunge zviri, zviri kunyanya ndinofunga ndizvo, asi handina urombo, kwete izvozvi. Pamwe makore mashoma apfuura mutsauko wakanzwikwa zvakanyanya, ndinofunga izvozvi zvirongwa zveLinux zvanyanya kumberi uye haudi yekupedzisira kuti uve nechimwe chinhu chinobatsira chimwe chinhu. kunyangwe ndichinetseka kuti zvinotora nguva yakareba sei kutora firefox 4 (kana kunyatsoitsiva iceweasel 4) mune debian, inogona kuitwa manyore nyore (iwe google uye wobuda kubata, haufanire kunyora chero chinhu: D)
Debian zvakare haina zvishoma zvekuona kubata, asi iwe unowedzera iyo Ubuntu theme (pakupedzisira ubuntu yakanakira chimwe chinhu: P) iwe fiddle nayo zvishoma uye inotaridzika zvakanaka, hehe.
saka mhedziso yangu ndeyekuti debian yakakosha, nekuti iri sarudzo yakanaka kwazvo kumushandisi. Izvo hazvina kuomarara zvachose, kunyangwe iwe uchifanira kutamba zvishoma zvishoma (zvishoma pane izvo zvinotora kuisa zvese zvirongwa mumawindo, ndinokuvimbisa) uye chikamu chinoonekwa chinogadziriswa zviri nyore uye nezvechikamu chekuvandudza, ndinofunga pamwe nekuyedza uye kusanganisa zvishoma neyakaedzwa repos yezviitiko zvakakosha, chii dombo
Ini ndinofunga kudaro, Debian mune zvakajairika mazwi ave asina basa sekugovera. Asi izvi hazvireve kuti zvirongwa zvavo zvese zvakanaka uye sezvo zviri zvemahara software zvinogona kushandiswa nekushandurwa neanoda.
Ini ndinofunga Debian inopfuura chero chinhu sosi yemapurojekiti uye nhoroondo. Kwete kugovera kwekushandisa.
Maonero angu ekuzvininipisa.
Pindura kuna Lailah
Ndakafarira chirevo chako. Ini ndinotenda kuti mupiro wechero distro haufanire kutarisirwa pasi. Ubuntu yakanaka kwazvo pakukwezva vashandisi vatsva nekuvanyudza muLinux nyika. Debian, kune rumwe rutivi, ine simba inova kugadzikana kwayo, izvo zvinoita kuti ive yakanaka kumaseva kana kune avo vanokoshesa icho chinhu mune yavo desktop OS, nezvimwe.
Debian ichiri kukosha seCentOS, OpenSUSE, Gentoo kana Slackware, mumaonero angu akanakisa ese
Ini pachangu, ndinofunga Debian kuva zvese, kana chiri chokwadi kuti parizvino ine chakavanzika, chakasviba, chinoyera chinzvimbo, asi zvakare ichokwadi kuti nepo Canonical ichiedza nesimba kuti irambe ichishanda pamiromo yemunhu wese, nharaunda yeDebian yakanyanya akasununguka. Izvo zvakasiyana zvakakosha.
Ini pachangu, ndinofunga Debian anga akarara pasocial media kwenguva refu, kunyangwe mumwedzi mishoma yapfuura ndiri kuona kuzvarwa patsva. Ini ndinokutengesa iwe kuti mune rinotevera gore isu tine mhinduro, zvirokwazvo Debian inotorazve chigaro chayo.
Handifunge kuti ndakazvinzwisisa: DD
Zvakanaka, muchidimbu. Debian zvirokwazvo muenzaniso webasa rinoramba richienderera, Canonical muenzaniso webasa irori, rako uye mushandirapamwe mukuru we media. 🙂
Panguva iyoyo nharaunda yeDebian yakadzikira zvakanyanya, neimwe nzira yaive yairamba zvachose, asi izvo zvachinja, zvirinani kunzwa kwangu ndekwekuti kubvira pakagadzwa mutungamiri mutsva weDebian iri kutanga kuchinja.
Ndinofunga ikozvino ndinozvitsanangura.
Dambudziko raDebian maDebianites ...
Ini ndinobvumirana zvachose. Debian haigone kuve isingakoshe, saka kukosha kwayo kwakakosha zvekuti hakugone kunyangarika. Ini ndinofunga Debian acharamba aripo kana vamwe vese vaenda. Debian ndeimwe yeembiru mukuvandudzwa kweGNU / Linux masisitimu uye ikozvino ichave iri zvakare muFreeBSD. Kwandiri Debian iri, sezvavanotaura ivo pachavo: Iyo yepasirose inoshanda system.
Sei tichisimbirira kuti debian ita zvinoitwa ne ubuntu ???, Ini ndiri mushandisi wevaviri uye ivo vari vaviri vari kundiitira zvakanaka, mumwe nemumwe pachinzvimbo chake uye mune rake basa, ini ndine server inomhanya na debian iyo MUGORE kwete Izvo hazvina kupa dambudziko, kana ndichifanira kuisa sisitimu yekushandisa pakombuta yekare hazvindipe matambudziko kana, kunze kwekumwe kumisikidzwa kunogona kukupengesa, Ubuntu zvakadaro yakanaka kwazvo kubasa, kunyangwe dzimwe nguva zvinotyisa kumhanya zvakanyanya Neshanduro nyowani, ndinofunga nzvimbo yepakati ichave yakanaka, gore rega rega vhezheni itsva yedistro kwete mwedzi mitanhatu seUbuntu kana makore maviri saDebian ………………… ..
Nenzira, mumwe munhu akashamisika kuti canonical iri kuenda kupi ??? ngativimbei kuti zvinosvika pakuzara.
Pindura kuna Esparrelinux
Ichokwadi, vakapusa nekuda kwekufunga uye kuyedza kuenderana uye kutendeseka navo. Isu tese tinoziva kuti zvinangwa nemisimboti ndezve chete zvekungotaura zvisina basa uye kwete chimwe chinhu chaunofanira kutevedzera muhupenyu. Iwe unofanirwa kuita sevamwe vese, isu tinotaura chimwe chinhu asi ita chimwe icho.Kana dai pakanga pasina vakawanda vanofunga zvakanaka, nyika ingadai iri nzvimbo iri nani!
Felipe Becerra akadaro
«Chete 7% yeUbuntu inova […] Pane vakasara, 74% yeUbuntu ndivo […] uye vasara 18% vari […]»
Ndine hurombo nekutaura-kwemusoro wenyaya, asi ndinofunga pane 1% inoyerera mune imwe nhanho.
(Ndoziva unonzwisisa pfungwa iyi, asi hazvikuvadze kugadzirisa kana kujekesa. Hapana mhosva).
Pindura Felipe Becerra
Ndiyo 1% yakarasika muether. Haha… handinyatso kuziva. Ndakavimba nedata rakapihwa nemurume uyu, asi unoreva chokwadi kuti mari yacho haivhare. Zvisinei, tora zano ...
Musoro wenyaya unonakidza zvishoma, debian ndiyo inovaka mamwe maLinux distros, inobvumira kuisirwa kodhi-yemahara kodhi, asi chinhu chakakosha ndechekuti inobvumidza kuzadza kwakazara mahara, ini ndinofarira kuve mukuru kusvika parizvino nekushandisa madhiraivha akanakisa epamutemo kusvika parizvino, asi ndinotenda kuti mukana we "zvese zvemahara" zvinofanirwa kuvapo chaizvo kuitira kuti kodhi yevaridzi irambe, zvirinani mahara. Kana zvikaitika kuti "zvemahara zvese" zvainge zvisipo uye mumwe akabva ataridzika netambo imwe chete yekodhi yekodhi, muridzi iyeye angangoda mari sezvo pasina imwe nzira uye obvarura zvisikwa zvese. Iko kungovepo kweimwe sarudzo, uye iwe wakanganwa kuwedzera Hurd, kuti kunyangwe kukura kwayo kuri kunonoka, senge kwaHaiku, maitiro ayo ane simba rakanyanya kupfuura iyo nix yatinofarira, zvakare ine simba rakanyanya kupfuura iyo MS inotungamira. Kana hurd ichikura ichave nemukana wakakura weDebian "yemahara zvese" uko kune avo vanoshanda zvine simba vatyairi vachawedzerwa uye zvirokwazvo kwese kufambira mberi kweUbuntu nevamwe. Nenzira, iwe unofanirwa kutarisa inotevera Comfusion DVD iyo inoita kunge yakanakisa Ubuntu pane steroids.
Kutendeseka, ndinofara kushandisa Debian kana ndichigona kuita kuti iratidzike senge Ubuntu desktop yangu neDocky, conky uye Screenlets izvozvi zvinoita kunge. Nemapurogiramu uye nezvimwe, ndinofunga ndakanaka kwazvo uye hazviwanzo kukosha kuti uve newazvino vhezheni. Chero zvazvingaitika, unganidza uye enda (ex- Windows mushandisi, tarisa zvandakave ... !!)
Asi ini ndinofunga ndeye hurukuro sekutaura kuti amai vemunhu havana kukosha kupfuura ivo. Pasina iyo, imwe yacho ingadai isingakwanisike uye izvi ndezvechokwadi nekuti hazvibudirire kuti kambani inoshuva kuunza chigadzirwa kumusika inofanira kutanga nzira yose kubva pakutanga uye Ubuntu iri 7% yekutanga.
Debian / Ubuntu… Ubuntu / Debian… Unondida, haundide?
Vanababa, mumaonero angu ekuzvininipisa, ndinotenda kuti rusununguko rwekusarudza izvo zvatinoda zvakanyanya rwakakosha pamusoro pezvinhu zvehunyanzvi.
Ini ndaishandisa Debian kweanenge makore maviri, nekuda kwebasa zvikonzero ndakatama ndichibva kuLinux uye zvishoma pasingasviki gore rapfuura ndakadzokera munzira yekuponeswa 😉 Nezvikonzero zvisina basa, ndakafunga kuisa Ubuntu uye ini ndakawana iyo inoshamisa ruzivo rwekuti yangu HP laptop yaive 100% inoshanda mumaawa maviri.
Mune ruzivo rwangu rwepamberi naDebian, ndinorangarira zvakatora anenge mwedzi kuti PC yangu yedesktop ishande zvinogamuchirwa (iyo michina yaive pamushini yaive pakati). Mushure mekubata nemazana ematambudziko, ini ndaive nemuchina une hupenyu hunobatsira hwakaguma apo bhodhi rangu reamai rakafunga kurega basa nekukurumidza.
Nhasi ndine chimwe chezvose zviri zviviri, kusimba, kudzikama uye kuvimba kwandinopihwa nenharaunda yaDebianita kuseri kweUbuntu pamwe nekureruka kwekushandisa, hushamwari pamwe neyakavandudzwa yandinopihwa neyekupedzisira ... ndinofanira kukumbira zvimwe? funga kudaro.
Kana paine chimwe chinhu chandisina kumbobvira ndanzwisisa, imo nekuti isu vedu vanoshandisa Linux vanopokana uye kurwira pakati pedu kudzivirira nyaya dzinonyanya nezve kuravira kwako kupfuura chero chinhu chipi zvacho. Ini ndinobvumirana naEsparrelinux, ini ndinoshandisa zvese zviri zviviri, mumaseva emakambani atinawo Debian, kutarisa neimwe nzira hazvinganzwisisike, asi sei ndichiomesera zvinhu kune vashandi vangu kana ini pachangu ndichishandisa Debian paE / T? Musanganiswa wemaitiro ese ari maviri akanaka, kune zvese zvimwe zviripo ... pane chimwe chinhu here?
Kwazisai vese kubva kuVenezuela 🙂
Pindura kuna 3rn3st0
Pfungwa yakanaka Marcelo, pasina mubvunzo ndiro dambudziko xD, dai paive nemadebianitas akawanda sekunge kune madhimoni mu freebsd !!!, hahaha, hapana, imwe neimwe ine muto wavanoda kwazvo ...
Zvakareruka sekutaura kuti kukosha kwacho kune kushivirira kwemazana muzana, muzviverengero kwete 100% kuvimbika ……
anoti: Kupesana: Kutanga neKusvina, Debian haizosanganisi mafemu eimba anouya mukati meLinux kernel. NDINOFUNGA KUTI HANDINA KUNZWISISA CHINHU !!!, uye usandiudze kuti komendi yaive
yakagadzirirwa kushandiswa uye kuwedzerwa kweiyo SL KUSHANDISWA NEZVINONYANYA KUSVIRA KUNE VASHANDI INOFANIRA KUVA NEHANYA. Ini ndinobvunza ... munguva dzino kuva nehana ndeyekunyanyisa, uyo, kwaziso kubva kumaodzanyemba. alunado.
Ini ndinobvumirana nechinyorwa. Debian inonyanya kukosha uye icharamba ichidaro kunyangwe paine vanhu vazhinji vanoshandisa Ubuntu.
Yangu Debian = Ubuntu,
kwandiri Ubuntu is = Debian Peroo Maquillado !!!
Ini ndaimbove mushandisi webuntu asi ndakasangana nedebian ndikapinda mairi, inyaya yekuravira zvakapusa, uye kana zviri nyore, ubuntu yakandibatsira zvikuru kuti ndinzwisise iyo GNU / Linux nharaunda uye kundikurudzira kuisa debian, mushure vese vatove kuziva Maitiro ainoita, hazvina kunetsa kuti ndigadzire netiweki yeWi-Fi kana kadhi rangu remifananidzo rino shanda sekutaura kwako, kunyangwe kune avo vachangotanga muDebian kana zvingave zvakaoma
Ini zvechokwadi handioni nyaya yacho mukukurukura idzi nyaya pakati peavo vedu vanoshandisa linux. Ini ndinofunga kuti mune ruzhinji rwedu pane kubatanidzwa kuziva izvo zvinogara zvichitiudza uye zvinotiyeuchidza nezve mabhenefiti makuru ekushandisa Linux. Pano pachagara paine rusununguko rwekusarudza. Zvimwe zvacho hazvina basa. Wese munhu anofara kushandisa distro yaanoda uye kana chimwe chinhu mune yavo distro chisingagutse ivo, ivo vanongo gadziridza kana kuisa package kana chinja distro zvinoenderana nezvavanoda.
Maitiro epfuma achiri kutonga munyika uye zvinosuwisa kuti vanhu havadi kuchinja. Iyi nhaurirano inofanirwa kutakurwa kwenguva yakati rebei uchifunga nezve mafungire evashandisi.
Pane zvakawanda zvinhu zvinopinda mukutora kwazvinofanira kushandiswa neOS. Kana munhu akatangwa mumawindo, semuenzaniso, nezvikonzero zvetsika uye maitiro, mumwe anotsvaga chepedyo chinhu chaanogona kuwana. Uye izvi zvinofukidza huwandu hwakawanda hwezvinhu, kubva kumifananidzo kusvika kune antivirus. Zvinonakidza kwandiri kuti ndinzwe mibvunzo yakaita seiko kana ukasashandisa antivirus muLinux, unozviita sei kuti usave nehutachiona?
Mukupedzisira uye kwandiri, mhinduro yacho yaizove. Nezvikonzero zvekureruka ini ndinosarudza Ubuntu, kunyangwe kuti ndiite PC yangu ishande ndinofanirwa kuisa software yekudyara. Zvisinei, ini ndanga ndatobhadhara zvikamu zvinouya muPC saka zvinondipa mvumo yekuishandisa.
Kana ndikada kuita zvakakomba, ndinotsvaga mhinduro isingandipe matambudziko kana kuwira pasi nguva dzese. Distro yakakura saDebian yakanaka pakuita zvakakomba nekuti inokupa kugadzikana kwakanyanya.
Ini ndiri mutsva ku linux uye ini handisati ndasiya zvachose windows uye kwete nekuti ini handidi asi nekuti ndine chikonzero chekuishandisa. Dai ndaigona kuzvipatsanura pachangu ndaizozviita uye ndobvisa zvachose software yevaridzi asi tiri vanhu vane hushamwari uye hatigone kugara takazvimiririra. Nenzira imwecheteyo, yakawanda yezvatinovaka, tinozviita tichifunga nezvevamwe kusangana nezhinji zvido. Uye kunyangwe tichifarira kusangana, isu tichagara tichidanana pamwe chete nezvazvinogadzira.
Jefferson Mukobvu akadaro
Chero bedzi mumwe munhu asingashandisi Windows, Debian uye Ubuntu vakakwana!
Pindura Jeferson Grueso
Debian ikozvino yakanyanya kupfuura chero chinhu chakachena uye chakasununguka kupfuura nakare kose, uyo anoirwisa ndeye asingazive chinonzi debian uye nemipiro mikuru yaakaita.
Iye zvino ine kernel yemahara zvachose, Debian ane hanya nekuvimbika, ecosystem, kugadzikana uye rusununguko rweGNU / Linux uye nekuichengeta nenzira yazvinofanira kuva uye nechinangwa chayo chepakutanga.
Ndinoziva iwe uri Ubuntu mushandisi uye wakambopofomadzwa asi, Canonical munguva pfupi yapfuura zvavanokoshesa kuunza vamwe vashandisi kuUbuntu uye kuita icho chinhu chepedyo kuMacOS X, zvakanyanya kuve nani. Canonical haina kufarira GNU, uye zvishoma kwazvo muLinux.
Canonical yakazivisawo kukosha kwekusununguka kwerusununguko uye yakatsigira zvirongwa zvekushambadzira.
Ndinokumbira ruremekedzo kune isu vedu vanokoshesa rusununguko, kana iwe uchifunga kuti rusununguko ibenzi saka handizive zvauri kuita pano, haugone kuva wakasununguka kana hafu nhapwa. iwe unogona kunge wakasununguka kana kwete, uye zvakaitwa naDebian hazvisi kusiya zvinhu nehafu.
Ini ndinogovana maonero ako 100% !!!
Ini ndinofunga zvakataurwa naSteven ichokwadi chose kana tikatarisa "Debian iri kuramba isingakoshi (kana yekufarira zvishoma) kune ruzhinji rwevashandisi veLinux, kunyanya zvine chekuita neUbuntu uye mamwe maDebian-akatorwa distros", Zvakajeka kuti inoreva kune vazhinji vevashandisi veLinux, uye izvi zvine chekuita nehutungamiriri, chimwe chinhu icho Debian chaasina kupa kana zvirinani hachiratidze kakawanda uye hachinei nechekuita kana kwete icho chinotsigira zvimwe zvivakwa kana kuti Zvimwe kana zvakawanda distros zvakavakirwa paDebian, zviri pachena kuti zvinoreva kuti iri kurasikirwa pasi pamberi peanoverengeka ma distros uye kuti inopa chimiro chekurara kanenge mumwedzi ichangopfuura, kubva pakuongorora kuti pasina Debian hapana Ubuntu ini kuva nechokwadi, iwe unofunga Ubuntu haigone kutevera nzira yayo yega kana kungoenderana nechero distro? Ini ndinofunga zvinogona, nenzira ko kana ndisingazvifarire ndezvekuti vashandisi vakanyoreswa kutevedzera ideology iwe iwe usafunge zvekuvadaidza kuti "vanonyanyisa" kana kuvadaidza Ini ndinotumira muridzi webhizimusi "mudzvanyiriri ane moyo munyoro" nekuda kwekuti hamumudi, ndinofunga makashaiwa rusaruro mumashoko enyu.
MaJuans, ndinofunga zvese zvaungafunga zvakanaka kwazvo. Chinzvimbo chako paDebian chinogona kupikiswa kutaura chidiki (kutaura zvazviri, ndiyo gakava randakaedza kutora muchinyorwa). Nezve zvipikisheni: 1) raingova jee (mudzvanyiriri chinhu chakakomba zvakanyanya ... ndinokuvimbisa kuti ndinoziva zvakakwana zvandiri kutaura nezvazvo: ini ndakapedza kudzidza mune zvematongerwo enyika), 2) chero zvakadaro, chirevo hachina zvakawanda zvinoita naMark semunhu asi neUbuntu kuvaka maitiro. MuDebian, dzinenge zvese zvinhu zvinogadziriswa pamwe. MuUbuntu (uye mune akati wandei mamwe ma distros) izvi hazvisizvo. Simply izvozvo.
Kumbundira kukuru uye ndinokutendai nekujoinha gakava!
Ndini Marco A. Pollolinux, musiki weComFusion, distro yakavakirwa paUbuntu uye nekudaro Debian, uyo anozivisa zvisina maturo zvakadaro ndi;
b) Kuudzwa zvisizvo
c) zvinongoda kugadzira mhirizhonga, (iyi sarudzo yekupedzisira handizive chaizvo nekuti, iyo yatakasara nayo a uye ne b)
Mhedziso, zvimwe zvirevo zvinosuruvarisa, iwe unongofanirwa kutora chero Ubuntu-based distro, uye tinya F1 pakutanga uye wozo F10 ...
Uye verenga chikamu icho chinoti "zvichibva paDebian" ...
DEBIAN HAIREI ISINGAITI, zvinoitika kwaari ndezvekuti vashandisi vazhinji vemakomputa vanozviona sechinhu chevane programmes chete nemamwe makomputa gurus, chimwe chinhu chakaoma kushandisa uye chakaoma kubata, inova yekushambadzira isina chimwe chinhu, uye nekufamba kwenguva ndinofunga kuti izvo yedu isu takagadzirisa Debian kubvira payakatangwa senge kuti ifungidzwe chimwe chinhu senge vepamusoro, asi chokwadi ndechekuti dambudziko chete iro Debian anaro nderekuti "RAKASIMBA KUSVIRA KUKODZWA".
Ini handisati ndawana dambudziko rekuisa Debian pamakomputa ekare neazvino, uye handina kuwana chero kambani yaive nematambudziko nezvirongwa zvavo, zvese zvinomhanya zvakakwana uye kana migove mizhinji yakanangana neUBUNTU yaifanira kunyatso funga kuti yavo ndeipi, ivo ndaizoona kuti DEBIAN pachokwadi.
Ini ndinobvumirana kwazvo nezvamunotaura. Rarama kwenguva refu Debian!
inofanirwa kugara ichifanira ...
Iwe wagamuchira iyi meseji nekuti Ngatishandise Linux yakagovana nayo
Gamuchira kukokwa kuti uone iyo yakazara posvo:
Iyo yeGoogle + purojekiti inoita kugovana pawebhu zvakanyanya sekugovana mukati
chaihwo-hupenyu. Dzidza ZVIMWE: http://www.google.com/+/learnmore/
Dzvanya apa kuti usazvinyora kubva pane izvi
"Chero munhu paanosimbisa kuti maviri kuwedzerana maviri akaenzana mana uye asingazive anopindura kuti maviri akawedzera maviri akaenzana nematanhatu, chetatu chinomuka uyo, nekuda kwekudzora uye kutaurirana, anopedzisira apedzisa achiti maviri akawedzera maviri akaenzana mashanu." (José Prat)
Kubvira riiniko kuda kuti imwe rusununguko ive yakanyanyisa?
Ini ndinoona iyi yekupinda isinganzwisisike. Zvinhu zvakaita:
* «Ngatitaurei kuva vakatendeseka: Debian haazivikanwe nekuve ane hushamwari distro kune" akajairika "mushandisi»
Kugadzikana kwaDebian, uko kungangokwezva kune vazhinji vashandisi vepa desktop, sezvo zvinouya nekubhadharisa kushaya zvekuvandudzwa kwazvino kana kunyorera "kunopisa"
Vanotaridza kusaziva chaiko panhau iyi. Uye iro bazi rekuyedza, rekuyedza?
Iko kudzikama hakufadzi kune vashandisi ve desktop? Nhema nhema kuti kudzikama ndeye maseva chete. Kusanzwisisika senge izvi zvinongoshanda chete kuti vanhu nhasi vasasiye Ubuntu, iyo kunyangwe hazvo kwave kugoverwa kwakabatsira kuvandudzwa kweGNU / Linux pakombuta, haisi iyo yakavimbika kwazvo, yakagadzikana, kana "mureza" wenharaunda.
Pindura kuna Nader
Ndinobvumirana naNader. Muchiitiko changu, ini ndiri newbie kuLinux uye ini ndine Debian Wheezy yakaiswa pasina kana matambudziko, kana kuisirwa kana kubata, kupfuura matambudziko echinyakare / zvikanganiso zvekuve uine Windows kwemakore mazhinji ... Kuti usarudze paDebian 7, kugadzikana kwaive chaizvo chimwe chehunhu hwandinokoshesa kwazvo. Nanhasi ndichiri kufunga zvakafanana. Ini ndiri mushandisi wekumba anoshandisa zvakajairwa maficha epc, hapana chakakosha, kubhurawuza, tsamba, ruzivo, nezvimwe.
Ehezve, ini ndinoona paInternet kuti kune mamwe ma distros ane mamwe maforamu anoshanda uye nemamwe akawanda mabloggi kusimudza kusahadzika, matambudziko. Ndinoshuva dai Debian anga aine akawanda, asi hei, pane nguva dzose pa forum pane ino webhusaiti iyo yandinotenda zvikuru nekuti vakambondibatsira.
Ini ndichaenderera mberi neangu Debian 7 uye ndichiedza kudzidza zvishoma zvishoma nguva dzese.
Juan Carlos Moreno akadaro
Izvi zvinoratidzika kwandiri sechikamu che "kupatsanura nekukunda" Ubuntu yanga ichindiitira zvakanaka kwazvo kubvira patakasangana. Shamwari yangu Miguel iri kuita zvakanaka kwazvo Debian ...
Ini ndoda iyo Linux iripo. Hutano!
Pindura Juan Carlos Moreno
Ichi chinyorwa chinopfuura makore maviri ekuberekwa.
Debian nariini, ndinofanira kutaura kuti ini ndakatangawo neUbuntu ipapo pandakanga ndiri muchikamu 8 nekuda kwaIlasaron kuna Jesús Conde kunyanya nekutenda kune avo vakanakisa vhidhiyo dzidziso, asi sezvo wese elitist anogara achitsvaga ruzivo, ndinofanira kutaura kuti kuti ndiite izvi zvaidikanwa kutama, Ipapo kuInstitute "IDAT" ndakasangana neCentOS asi ndisati ndasarudza Fedora uye mukufanana ndakaenda neino Definitive GNU / Linux Debian kuti mune yangu ruzivo rwekuzvininipisa ndakasimbisa kuti haina bulletproof kunyangwe ini ndisingadaro. kuramba kuti zvakandipa mamwe matambudziko asi ndanga ndisisina hanya uye panguva yese iyi kubva muna 2009 kusvika nhasi ndaedza OpenSUSE, SlackWare, WhiteBox, Mint, Ubuntu uye mafashoni azvino asi senge nyaya yekuongorora wozokurudzira kurerukirwa kweumwe neumwe achiedza kuevhangeri "win2sos" yazvo ndinofanira kutaura kuti nekuda kwaBeryl uye emerald munguva yavo ndakakwanisa kugonesa kunyangwe ivo vasingadi kutamira kune iyo GNU / Linux nyika uye nenyaya zhinji dzekubudirira asi ivo pachavo, seni uye co n kumwe kukura tinobvumirana kuti Debian ndiyo uye ichave iri inoshanda system par kugona uye kunongedzera munyika ino, hongu ndinoti kune vepakati vashandisi zvichienda mberi, asi vasingakanganise kubva kune zvigadzirwa uye kwavo kukuru kuedza kusvika nekuzivisa kuti hazvisi Kune mahwindo chete, ndiri pasi pekushoropodzwa asi ini ndaifanira kutaura zvandinofunga, kwaziso kubva kuLima-Peru. r4r.
Tumira Dhata: Gnome-Shell 'fuck'. asi nekuda kweizvozvo ini ndinoda Arch .;).
Ini pachangu, zvakandisekesa, kuzvituka, asi sezvo paine vanhu vanofarira kuoneka pamutengo wekuzviita benzi. Ndisingade kugumbura asi ndakanyatso kuseka zvangu. Vanofanira kufa uye vese vanoora pamwe chete.
Firefox 4 beta 11 yave kuwanikwa